Vinícius Júnior oo sameeyey rikoodh aan horay looga dhigin tartanka Champions League – Gool FM
(Madrid) 22 Okt 2020. Vinícius Júnior ayaa xalay sameeyey rikoodh aan horay looga dhigin tartanka horyaallada Yurub ee Champions League.
Waxa uu noqday Vinicius ciyaaryahankii isagoo bedel ku soo galay goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ka dhaliyey taariikhda Champions League, sidoo kalena isagu waa gooldhaliyaha ugu sarreeya Real Madrid xilli ciyaareedkan kaddib markii uu saddex jeer shabaqa soo taabtay.
Inkastoo kooxdiisa Real Madrid ay khasaaro 2-3 kala kulantay Shakhtar Donetsk, haddana xiddiga reer Brazil ayaa dhaliyey gool dhaqsiyo badan kaddib markii uu ka soo kacay kursiga keydka.
Waxa uu Vinicius bedel ku soo galay ciyaara daqiiqaddii 59-aad kaddib markii garoonka laga saaray oo lagu bedelay Luka Jovic, waxaana weeraryahankan Vinicius ay ku qaadatay inuu gool dhaliyo kaliya 14 ilbiriqsi kaddib markii uu kulanka ku soo biiray.
Taabashadiisii ugu horreysay kubadda ayuu shabaqa soo taabtay Vinicius kaddib markii uu ka faa’iideystay qalad uu sameeyey kabtanka kooxda Shakhtar.
Goolkaas uu dhaliyey Vinicius ayaa ka dhigan goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda Champions League ee uu dhaliyo xiddig bedel ku soo galay ciyaarta.
Waxaa horey rikoodh dhaqsiyo badan haystay xiddigaha kala ah Lars Ricken iyo Andy van der Meyde oo iyagoo ciyaarta ku soo biiray ay ku qaadatay inay goolal dhaliyaan 15 ilbiriqsi, sidoo kale Marco Asensio ayaa gool kaga dhaliyey Valencia xilli ciyaareedkii hore kaliya 30 ilbiriqsi kaddib markii uu bedel ku soo galay.
Vinicius ayaa bilow fiican qaadanaya xilli ciyaareedkan cusub, waxaana uu yahay gooldhaliyaha ugu sarreeya haatan kooxda Los Blancos fasal ciyaareedkan kaddib markii uu dhaliyey saddex gool.
Labo ka mid ah goolashaas Vinicius waxa uu ka dhaliyey horyaalka La Liga, halka goolka kale uu xalay ka dhaliyey tartanka Champions League.